* အရွယ်အစား: H600 * w420 * d370mm
* အထူ - ခန္ဓာကိုယ် - 20mm, တံခါး - 12mm
* n.w ။ : 60 ကီလိုဂရမ်
* အတွင်းပိုင်းအလင်း LED
* နောက်ကျောဘက်မှာ2mounting တွင်း
စျေးပေါသောစျေးနှုန်းအထောက်အထားလုံခြုံရေးအပ်ငွေအပ်ငွေသေတ္တာစက်ရုံ - Foshan Weierxin စျေးကွက်တွင်အလားတူထုတ်ကုန်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်၎င်းသည်စွမ်းဆောင်ရည်, အရည်အသွေး, အသွင်အပြင်, အသွင်အပြင်စသည်ဖြင့်နှိုင်းယှဉ်နိုင်သည့်ထူးချွန်သောကောင်းကျိုးများနှင့်စျေးကွက်တွင်နာမည်ကောင်းများခံစားနိုင်ပြီးစျေးကွက်တွင်နာမည်ကောင်းများရှိသည်။ စျေးပေါသောစျေးနှုန်းအထောက်အထားလုံခြုံရေးအပ်ငွေသေတ္တာစက်ရုံ - Foshan Whansxin ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များအားသင်၏လိုအပ်ချက်အရစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်နိုင်သည်။
2. လက် ငါနမူနာရနိုင်မလား?
A: ဟုတ်ကဲ့, နမူနာရရှိနိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်နမူနာအခကြေးငွေကိုကောက်ခံပါမည်, ဝယ်သူနေရာအမှာစာတွင်ငွေပြန်အမ်းမည်။
3. လက် ကုန်ပစ္စည်းအပေါ်ကျွန်ုပ်တို့၏လိုဂိုပုံနှိပ်နိုင်ပါသလား။
1. OSO 9001 ကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအရည်အသွေးအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ကို Pass လုပ်ထားသည်။
* မီးအဆင့်သတ်မှတ်ချက် - မိနစ် 30 ။* Lock: Digital + Key Lock / Fingerprint + Key Lock ။* အစိုင်အခဲသံမဏိ Bolt, အချင်း 24 မီလီမီတာ။* အပွင့် 90 ဒီဂရီပွင့်လင်းနှင့်အတူချောမွေ့တံခါးပိတ်။* အတွင်းပိုင်းကမ်းလွန်ရေတိမ်ပိုင်း။QG-33 မှလွဲ. ထိပ်ဆုံးတွင်သေးငယ်တဲ့အစိုးရအဖွဲ့& QG-43 ။* အတွင်းပိုင်းအလင်း။* အမြင့်သည် 520 မီလီမီတာကျော်ရှိသောအခါဘီး4ဘီးများရှိသည်။ ဘီးသည် 70 မီလီမီတာမြင့်မားသည်။* နောက်ကျောဘက်မှာ2mounting တွင်း။